Zuza Ngokupheleleyo Kumalungiselelo KaThixo—Njani? | IMboniselo
“Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe.”—ISAYA 48:17.
IINGOMA: 117, 114
Yintoni enokusenza singangenelwa kwamanye amalungiselelo kaYehova?
Ngawaphi amacebiso anokusinceda singenelwe kuzo zonke iinxalenye zeBhayibhile?
Sinokungenelwa njani ngokufunda amanqaku enzelwe abantu abaselula kunye namanqaku enzelwe uwonke-wonke?
1, 2. (a) AmaNgqina kaYehova avakalelwa njani ngeBhayibhile? (b) Yiyiphi inxalenye yeBhayibhile oyithandayo?
THINA maNgqina kaYehova, siyithanda egazini iBhayibhile. Iyasithuthuzela, isinika ithemba nolwalathiso esinokuluthemba. (Roma 15:4) Asiyoncwadi yamntu, kodwa ‘ililizwi likaThixo.’—1 Tesalonika 2:13.
2 Uninzi lwethu luneenxalenye zeBhayibhile oluzithanda ngaphezu kwezinye. Abanye bathanda iincwadi zeVangeli, kuba zibonisa ubuntu obuhle bukaYehova ngoYesu. (Yohane 14:9) Abanye bathanda iincwadi zesiprofeto ezifana neSityhilelo, ezisibonisa “izinto ezimele zenzeke kamsinya.” (ISityhilelo 1:1) Abanye bayathuthuzeleka xa befunda incwadi yeeNdumiso, ukanti bambi bathanda ukufunda ngamacebiso akwincwadi yeMizekeliso. Kucacile ke ukuba iBhayibhile yincwadi yabantu bonke.
3, 4. (a) Sivakalelwa njani ngeencwadi zethu? (b) Ziziphi iincwadi esizifumanayo ezenzelwe ngokukhethekileyo amaqela athile?
3 Ngenxa yokuba siyithanda iBhayibhile, siyazithanda neencwadi zethu, ezisekelwe kwiLizwi likaThixo. Zonke iincwadi, iincwadana, iimagazini nolunye uncwadi esilufumanayo, ngamalungiselelo avela kuYehova. Zisinceda sihlale sisondelelene naye, yaye sigcine ukholo lwethu lomelele.—Tito 2:2.
4 Uninzi lweencwadi zethu lubhalelwe amaNgqina kaYehova. Sekunjalo, kukho iincwadi ezibhalelwe ngokukhethekileyo amaqela athile, njengolutsha okanye abazali. Uninzi lwamanqaku neevidiyo ezikwiwebhsayithi yethu, zilungiselelwe ngokukhethekileyo abantu abangengawo amaNgqina kaYehova. Ubukho bezi zixhobo zahlukahlukeneyo bubungqina bokuba uYehova uye wasigcina isithembiso sakhe sokubanika ulwalathiso bonke abantu.—Isaya 25:6.
5. Yintoni esinokuqiniseka ukuba iyamvuyisa uYehova?
5 Uninzi lwethu lungathanda ukuchitha ixesha elingakumbi lufundisisa iBhayibhile neencwadi zethu. Ngoko liyohluka ixesha esilichitha sifundisisa uncwadi ngalunye esilufumanayo. Sinokuqiniseka ukuba uYehova uyavuya xa silisebenzisa kakuhle ixesha lethu ngokufundisisa iBhayibhile nezinye iincwadi zethu. (Efese 5:15, 16) Sekunjalo, kukho ingozi esimele siyilumkele. Yiyiphi?
6. Yintoni enokusenza siphoswe ngamanye amalungiselelo kaYehova?
6 Ukuba asilumkanga, sisenokuzibona sesicinga ukuba ezinye iinxalenye zeBhayibhile okanye iincwadi ezithile azenzelwanga thina. Ngokomzekelo, kuthekani ukuba inxalenye ethile yeBhayibhile ayibonakali inokusinceda? Okanye kuthekani ukuba ayibhalelwanga thina ngokungqalileyo? Ngaba sisuka siyifunde nje ngokukhawuleza inkcazelo enjalo okanye siphephe kwaukuyifunda? Ukuba senza loo nto, sinokuphoswa yinkcazelo eninzi enokusinceda. Sinokuyiphepha njani loo ngozi? Simele sikhumbule ukuba yonke inkcazelo esiyifumanayo ivela kuYehova. EBhayibhileni sifunda oku: “Mna, Yehova, ndinguThixo wakho, Lowo ukufundisa okuyingenelo kuwe.” (Isaya 48:17) Kweli nqaku siza kuthetha ngamacebiso amathathu anokusinceda sizuze ngokupheleleyo kumalungiselelo uYehova asinika wona.
AMACEBISO OKUSINCEDA SIZUZE KUFUNDISISO LWEBHAYIBHILE
7. Kutheni simele sifunde iBhayibhile ngengqondo ephangaleleyo?
7 Funda ngengqondo ephangaleleyo. Kuyinyaniso ukuba ezinye iinxalenye zeBhayibhile zazibhalelwe mntu uthile okanye iqela labantu. Sekunjalo, iBhayibhile isixelela ukuba “sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo.” (2 Timoti 3:16) Yiloo nto kufuneka sibe nengqondo ephangaleleyo xa sifunda iBhayibhile. Omnye umzalwana uye azame ukukhumbula ukuba angafunda izifundo eziliqela kwingxelo nje enye. Oko kumnceda abone iingongoma ezingacacanga. Ngoko ke ngaphambi kokuba sifunde iBhayibhile, simele sicele uYehova asinike ingqondo ephangaleleyo nobulumko ukuze siqonde iingongoma afuna sizifunde.—Ezra 7:10; funda uYakobi 1:5.
Ngaba ungenelwa kangangoko kufundisiso lwakho lweBhayibhile? (Jonga isiqendu 7)
8, 9. (a) Xa sifunda iBhayibhile yiyiphi imibuzo esinokuzibuza yona? (b) Iimfaneleko zabadala abangamaKristu zisixelela ntoni ngoYehova?
8 Zibuze imibuzo. Xa ufunda iBhayibhile, yima uze uzibuze le mibuzo: ‘Indixelela ntoni le nto ngoYehova? Ndinokuyisebenzisa njani le nkcazelo kubomi bam? Ndinokuyisebenzisa njani ekuncedeni abanye?’ Xa sicingisisa nzulu ngale mibuzo, siza kuzuza ngakumbi kufundisiso lwethu lweBhayibhile. Masithethe ngomnye umzekelo. IBhayibhile icacisa iimfaneleko ezithile abafanele babe nazo abadala abangamaKristu. (Funda eyoku-1 kuTimoti 3:2-7.) Ewe kona, uninzi lwethu asingobadala, ngoko sinokucinga ukuba le nkcazelo ayinakusinceda nganto. Sekunjalo, masisebenzise le mibuzo mithathu sele sithethe ngayo, ukuze sibone indlela ezinokusinceda ngayo ezi mfaneleko zidwelisiweyo.
9 “Kundixelela ntoni oku ngoYehova?” UYehova usinike uludwe lweemfaneleko zabadala. Ulindele lukhulu kumadoda anyamekela ibandla. Oku kubonisa ukuba uYehova ulixabisile ibandla. IBhayibhile ithi walithenga “ngegazi lowakhe uNyana.” (IZenzo 20:28) Ngoko uYehova ulindele ukuba abadala babe yimizekelo emihle, kwaye uza kubaphendulisa ngendlela abawaphatha ngayo amalungu ebandla. Ufuna sizive sikhuselekile njengoko besinyamekela. (Isaya 32:1, 2) Xa sifunda ngezi mfaneleko, sitsho siqonde indlela uYehova asikhathalele ngayo.
UYehova ulindele ukuba ngamnye kuthi abe nengqiqo
10, 11. (a) Xa sifunda ngeemfaneleko zabadala, sinokuyisebenzisa njani loo nkcazelo ebomini bethu? (b) Sinokuyisebenzisa njani loo nkcazelo ekuncedeni abanye?
10 “Ndinokuyisebenzisa njani le nkcazelo kubomi bam?” Ukuba sele ungumdala, umele uhlale uluhlola olu ludwe lweemfaneleko uze uzame ukuphucula. Ukuba “uzabalazela isigxina sobuveleli,” umele uzame ukuzifikelela ezi mfaneleko kangangoko unako. (1 Timoti 3:1) Kodwa onke amaKristu angafunda kwezi mfaneleko. Ngokomzekelo, uYehova ulindele ukuba ngamnye kuthi abe nengqiqo. (Filipi 4:5; 1 Petros 4:7) Xa abadala ‘beyimizekelo emhlambini,’ sinokufunda kubo size ‘sixelise ukholo lwabo.’—1 Petros 5:3; Hebhere 13:7.
11 “Ndinokuyisebenzisa njani le nkcazelo ekuncedeni abanye?” Sinokusebenzisa uludwe lweemfaneleko zabadala abangamaKristu ukunceda izifundo zeBhayibhile nabanye abantu abanomdla, ukuze baqonde indlela abahluke ngayo abadala kubefundisi beecawa. Olu ludwe lunokusinceda sixabise umsebenzi wabo onzima abawenzayo ebandleni lethu. Kwaye oku kuza kusinceda sibahlonele aba bazalwana. (1 Tesalonika 5:12) Okukhona sibahlonela, kokukhona beya kusivuyela ngakumbi isabelo sabo.—Hebhere 13:17.
12, 13. (a) Sisebenzisa izixhobo esinazo, luluphi uphando esinokulwenza? (b) Yenza umzekelo wendlela ukuphanda okunokukunceda ngayo ubone nkqu nezifundo ezifihlakeleyo.
12 Yenza uphando. Xa sifundisisa iBhayibhile, simele sijonge iimpendulo zale mibuzo ilandelayo:
Ngubani obhale le nxalenye yeBhayibhile?
Yabhalelwa phi le ncwadi yaye nini?
Ziziphi iziganeko ezibalulekileyo ezazisenzeka xa kwakubhalwa le ncwadi?
Inkcazelo enjalo inokusinceda siqonde izifundo ebesingenakukhawuleza ukucacelwa zizo.
13 Ngokomzekelo, uHezekile 14:13, 14 uthi: “Ke lona ilizwe, ukuba lithe lenza isono kum ngokwenza ngokungathembeki, ndiza kusolulela kulo isandla sam ndize ndiyaphule kulo intonga ekujingiswa kuyo izonka ezibusazinge, kwaye ndiza kuthumela kulo indlala ndize ndinqumle kulo umntu wasemhlabeni nesilwanyana sasekhaya. ‘Yaye ukuba la madoda mathathu ayephakathi kwalo, uNowa, uDaniyeli noYobhi, wona ebeya kuwuhlangula umphefumlo wawo ngenxa yobulungisa bawo,’ itsho iNkosi enguMongami uYehova.” Xa sisenza uphando, sifumanisa ukuba uHezekile wawabhala la mazwi kwiminyaka eyi-612 ngaphambi kokufika kukaKristu. Kwakusele kudlule amakhulukhulu eminyaka uNowa kunye noYobhi beswelekile, kodwa uYehova wayesakukhumbula ukuthembeka kwabo. Yena uDaniyeli wayesaphila. Kusenokwenzeka ukuba, wayemalunga neminyaka eyi-20 ubudala xa uYehova wathi ulilungisa njengoNowa kunye noYobhi. Yintoni esiyifundayo koku? UYehova uyababona kwaye uyabaxabisa bonke abakhonzi bakhe abathembekileyo, kuquka nabo basebatsha.—INdumiso 148:12-14.
FUNDA IINCWADI EZAHLUKAHLUKENEYO
14. Inkcazelo ebhalelwe ulutsha ilunceda njani, ibe abanye banokungenelwa njani kuyo? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
14 Iincwadi ezibhalelwe ulutsha. Sifundile ukuba sinako ukungenelwa kuzo zonke iinxalenye zeBhayibhile. Ngokufanayo, sinokungenelwa kulo lonke uncwadi lwethu. Makhe sithethe ngemizekelo embalwa. Kule minyaka idlulileyo, uYehova uye wanika ulutsha inkcazelo eninzi.  (Jonga umbhalo osekugqibeleni.) Le nkcazelo ilunceda lukwazi ukumelana nengcinezelo esikolweni kunye neengxaki zokukhula. Kodwa ke thina singabanye sinokungenelwa njani kule nkcazelo? Xa siyifunda, sinokutsho sizazi iingxaki abajamelana nazo abo baselula size sikwazi ukubakhuthaza.
AmaKristu akhulileyo awafanele ayijongele phantsi inkcazelo ebhalelwe ulutsha
15. Kutheni amaKristu akhulileyo kufuneka abe nomdla kumanqaku abhalelwe ulutsha?
15 AmaKristu akhulileyo awafanele ayijongele phantsi inkcazelo ebhalelwe ulutsha. Ngokomzekelo, sonke simele sisoloko sithethelela iinkolelo zethu, silawule iimvakalelo, silwe nengcinezelo yoontanga, size siphephe unxulumano neendlela zokuzonwabisa ezimbi. Nangona ke la manqaku ebhalelwe abantu abaselula, athathwe eBhayibhileni yaye onke amaKristu anokufunda lukhulu kuwo.
16. Yintoni enye iincwadi zethu ezibanceda ukuba bayenze abantu abaselula?
16 Iincwadi ezibhalelwe abantu abaselula zinokubanceda bomeleze ubuhlobo babo noYehova. (Funda iNtshumayeli 12:1, 13.) Abantu abadala banokungenelwa nabo. Ngokomzekelo, uVukani! ka-Aprili 2009 wawunenqaku elithi “Abantu Abaselula Bayabuza . . . Ndingenza Njani Ukuze Ndikuthande Ukufunda IBhayibhile?” Eli nqaku lalinamacebiso amaninzi aluncedo nebhokisi umntu awayenokuzisikela yona ayigcine, aze ayisebenzise kufundo lwakhe. Ngaba abantu abadala bangenelwa kweli nqaku? Omnye umfazi ongumzali uthi, ufundisiso lweBhayibhile belusoloko lumnzimela. Kodwa waye wawasebenzisa amacebiso afumaneka kweli nqaku, yaye ngoku ukhangela phambili kufundisiso lweBhayibhile. Uthi uye wakuvuyela ukubona indlela iincwadi zeBhayibhile ezidibana ngayo nekumnandi ngayo ukuzifunda. Wongezelela ngelithi, “Zange ndalonwabela kangaka ufundisiso lweBhayibhile.”
17, 18. Sinokungenelwa njani xa sifunda inkcazelo eyenzelwe uwonke-wonke? Yenza umzekelo.
17 Iincwadi zikawonke-wonke. Ukususela ngo-2008, siye saneMboniselo yohlelo lokufundisa. Olu hlelo lubhalelwe ngokukhethekileyo amaNgqina kaYehova, kodwa sinazo neemagazini ezibhalelwe abantu bonke. Sinokungenelwa njani nakuzo? Masenze umzekelo. Xa umemela umntu eHolweni yoBukumkani, uye uvuye kakhulu xa ezile. Ucinga ngaye njengoko kunikelwa intetho. Uyazibuza ukuba inoba uvakalelwa njani ngoko akuvayo, yaye ngaba bethu uyakhuthazeka ukuba atshintshe ubomi bakhe? Oku kuyakuchukumisa, uze ube nombulelo ngakumbi ngaloo ntetho.
18 Kunokwenzeka into efanayo xa sifunda iincwadi ezibhalelwe abantu bonke. Ngokomzekelo, iMboniselo kawonke-wonke namanqaku aku-jw.org acacisa iBhayibhile ngendlela ekulula ukuyiqonda. Xa siyifunda le nkcazelo, sitsho siyiqonde size sibe nothando olungakumbi ngeenyaniso zeBhayibhile esele sizazi. Kwakhona sisenokufunda neendlela ezintsha zokucacisa iinkolelo zethu xa sishumayela. Ngendlela efanayo, noVukani! usinceda sikholelwe ngakumbi kubukho boMdali. Ukwasinceda sikwazi nokucacisa iinkolelo zethu.—Funda eyoku-1 kaPetros 3:15.
19. Sinokumbonisa njani uYehova ukuba sinombulelo ngamalungiselelo akhe?
19 Kucacile ke ukuba uYehova usinike amacebiso nolwalathiso oluninzi olusincedayo. (Mateyu 5:3) Masiqhubeke siyifunda size siyisebenzise inkcazelo asinike yona. Xa sikwenza oko, sibonisa uYehova ukuba sinombulelo ngawo onke amalungiselelo akhe.—Isaya 48:17.
^  (isiqendu 14) Le nkcazelo iquka Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo, Umqulu 1 no-2, kunye namanqaku athi “Ulutsha Luyabuza,” afumaneka kwi-intanethi.
UYehova usinika amacebiso nolwalathiso olusincedayoo. Amalungiselelo kaYehova aquka iBhayibhile, iincwadi zethu nenkcazelo eku-jw.org. Siyangenelwa xa siyifundisisa ngokucokisekileyo le nkcazelo
Ukuba nengqondo ephangaleleyo kuthetha ukukulungela ukwamkela amacebiso amatsha nahlukileyo. Xa sifunda iBhayibhile neencwadi zethu, simele sicingisise ngendlela le nkcazelo enokusinceda ngayo